पुँजी बजार सङ्कटमा जिम्मेवार को ? SULSULE:A Truly Nepali News Portal
पुँजी बजार सङ्कटमा जिम्मेवार को ?
२०७६ मंसिर २४ मा प्रकाशित
पछिल्लो समयमा सेयर बजार खस्किँदो अवस्थामा छ भन्दा फरक नपर्ला । पछिल्लो समयमा सेयर बजार ओरालो लागेर नेप्से ११ सय अंकको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । १८८१ अंकसम्म पुगिसकेको नेप्से पछिल्लो समयमा ११ सय अंकमा झरिसकेको थियो । यसबीचमा केहीले कमाए पनि अधिकांश लगानीकर्ताहरूले गुमाएका छन् । पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा भइरहेको उतारचढाबलाई कतिपयले राजनीतिक सरकार नियामक निकायहरू र अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग जोड्ने गरेका छन् ।
अहिले कतिपय लगानीकर्ताहरू मनोविज्ञानको त्रासमा पनि रहेका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । यसकारणले पनि कतिपय लगानीकर्ताहरूको भनाइमा अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडा रहेसम्म सेयर बजार उकालो लाग्न नसक्ने बताउँछन् । त्यसो त नेकपाको सरकार बनेपछि डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेदेखि ओरालो लागेको सेयर बजारले गति लिन नसकेको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् तर पनि सेयर बजारले गति लिन सकिरहेका छैन । अहिलेको सिजन भनेको सेयर बजार बढ्ने सिजन हो । अहिले सबैजसो कम्पनीहरूले आ–आफ्नो लाभांश घोषणा गरिरहेको समयमा सेयर बजार (नेप्से) बढ्न पर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेका छैन । कतिपय सरोकारवालाहरूले सेयर बजारमा राजनीतिक प्रभाव परेको कुरा बताउने गरेका छन् ।
अहिले देशमा नेकपाको एक तिहाइको स्थायी सरकार छ । तर, पनि सेयर बजार भने बढ्न सकिरहेको छैन । कतिपयले वामपन्थीहरूको सरकार सेयर बजारको लागि अशुभ छ भनेर पनि भन्ने गरिरहेका छन् । त्यसो त गएको निर्वाचनको बेला वाम गठबन्धन गरेदेखि नै सेयर बजारमा नकारात्मक असर परको थियो । त्यसबेला पनि वाम गठबन्धनलाई सेयर बजारले पत्याएन भनेर चर्चा पनि चलेको थियो ।
अहिले नेकपाको सरकारमा रहेका अर्थमन्त्री देशको अर्थतन्त्र बुझेका, जानेका, सेयर बजारसम्बन्धी जानकार भएको कारणले सेयर बजारले सुधारको आशा लगानीकर्ताहरूले गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री नै सेयर बजारप्रति नकारात्मक भएको कारणले सेयर बजारमा सुधार आउन सकेन । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बेला–बेलामा सेयर बजारका सम्बन्धमा दिने गरेको अभिव्यक्तिले सेयर बजारमा खति मात्र हुने गरेका छन् ।
विगतमा पनि वामपन्थीहरूको नेतृत्वको सरकारमा रहेका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सेयर बजारलाई जुवाको संज्ञा दिँदा सेयर बजार नै धराप हुन लागेको थियो । यदि वामपन्थीको सरकार सेयर बजारको लागि अशुभ भए अब पाँच वर्षसम्म सेयर बजारले यस्तै नियति भोग्नु पर्ने हो त ? त्यसो त अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफ्नो छवि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू माझ नकारात्मक बनाएको कुरा पनि देखिन्छ । यस कारणले पनि होला सेयर बजारका सेयर लगानीकर्ताहरूको कथित नेता भनिनेहरूले अर्थमन्त्रीको राजीनामा समेत मागेका छन् । सेयर बजार पनि देशको अर्थतन्त्रको एउटा पाटो हो । यसमा संकट आए देशको अर्थतन्त्रलाई पनि नकारात्मक असर पार्ने गर्छ ।
देशका अर्थतन्त्र जानेबुझेका अर्थमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू दिनेभन्दा पनि सेयर बजारलाई सुधार गर्नको लागि के–कस्तो पाइलाहरू चाल्न पर्ने हो र के–कस्तो नीति नियम निर्देशन अनि पूर्वाधारहरू निमाण गर्न पर्ने हो, त्यसको लागि काम गर्न जरुरी छ । नेप्से १८८१ अंक पुग्दा सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताहरूको घर खेत डुब्ने अवस्था आइसकेका छन् । यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यसो त बजारमा सेयरको संख्या बढ्दै छ भने सेयरको भाउ घट्दै छ । टपका भनिने वाणिज्य बैंकहरूको सेयर नै चार/पाँच सय प्रतिकित्तामा पाउन थोलेका छन् । पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा सेयरको आपूर्ति बढेकोले नेप्से ओरालो लागेको पनि बताइन्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिलेको कारणले भाउमा घटबढ हुन स्वाभाविक हो । यो अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले पनि यस्तै भन्छ । पछिल्लो समयमा सेयर बजार ओरालो लागेको कारण बजारमा सेयरको आपूर्ति बढेकोले नै हो भनेर भन्न पर्ने हुन्छ । अहिले सेयरधनी लगानीकर्ताहरूसँग सेयरको थुप्रो नै भइसकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजी चार सय प्रतिशतले बढाउनु परेको कारणले धमाधम हकप्रद सेयरहरू जारी गरेकोले सेयरधनीहरूसँग सेयरको थुप्रो नै भइसकेको छ । यसकारणले लगानीकर्ताहरू सेयर खरिद गर्नमा भन्दा पनि बिक्री गर्नतिर लागेको कारणले बजारमा मागभन्दा आपूर्ति बढेको र सेयरको भाउ घटेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी नीति र असक्षमताले गर्दा पनि सेयर बजार डामाडोल भएको हो । नेप्से १८८१ अंकसम्म पुगेर ११ सय अंकको हाराहारिमा झर्नुको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि नीतिको कारणले हो भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूलाई लगभग चार प्रतिशतको पुँजी वृद्धि गर्ने नीति नियम लाद्नु भन्दा पहिले आफ्नै तरिकाले चलिरहेको नेप्सेलाई सेयर बजारलाई पुँजी वृद्धिको नीतिले बेस्सरी हल्लाइदियो । कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धि गर्नको लागि बोनस सेयर र तीन/चार सयको प्रतिशतले हकप्रद सेयरहरू जारी गर्ने कुरालाई उचालेर केही सेयर बजारको माहिर खेलाडीहरूले यसबाट लाभ लिए । कतिपय लगानीकर्ताहरूले हकप्रद सेयर पाउने आशले महँगोमा सेयर खरिद गरेको कारणले नेप्से अस्वाभाविकरुपले बढेर १८८१ अंकसम्म पुगे भने बजारमा सेयरको थुप्रो भए । यस कारणले सेयर बजारले अहिलेसम्म गति लिन सकिरहेको छैन ।
त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालमा सेयर बजारलाई मात्र तरङ्गित बनाइरहे । नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेशको समयमा पुँजी वृद्धिको नीति निर्देशनहरू बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूको टाउको बजारिदिए भने अहिले आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुने बेलामा पनि बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा जानको लागि दबाक दिइरहेका छन् । कतिपयको भनाइमा तीन जना डा. साहेबहरूले सेयर बजारलाई बिगारे भनेर पनि भन्ने गरेका छन् ।
१५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू भएको सेयर बजार र खर्बौँ रूपैयाँ लगानी रहेको सेयर बजार देशको अर्थतन्त्रको एउटा पाटोको रूपमा रहेको छ । तर, यो यस्तो अवस्थामा आउँदा लगानीकर्ताहरू र यससँग सरोकार राख्नेहरू चिन्चित हुनु स्वभाविक नै हो । अहिले विभिन्न कम्पनीहरू हाइड्रोपावर, माइक्रोफाइनान्स, नयाँ–नयाँ सञ्चालनमा आएका बीमा कम्पनीहरूको साथै रियल सेक्टरमा आउने गरेकोले सेयर बजार ओरालो लाग्नु सेयर बजारले गति लिन नसकेको र सेयर बजारको लागि राम्रो नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्  ।
पछिल्लो समयकमा सेयर बजारले गति लिन नसकेको र सेयर बजार ओरालो लागेको मा यसको धेरै कारणहरू हुन सक्छ । यसको जिम्मवार को हो र दोष कसको हो भन्ने कुरा अन्योल नै छ । सरकारको, नेकपाको अर्थमन्त्रीको, नेपाल राष्ट्र बैंकको, नियामक निकायहरूको वा स्वयम् लगानीकर्ताहरूको ? सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले पनि बुझ्न पर्ने कुरा सेयर बजार भनेको जोखिमको व्यवसाय हो । यसमामा जोखिम पनि हुने गर्दछ भने यसले राम्रो प्रतिफल पनि दिने गर्छ ।
सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले कहिले गुमाउँछन् त कहिले कमाउँछन् पनि । यसकारणले पनि जोखिम मोल्न नचाहनेहरूले सेयर बजारमा प्रवेश नगरेको नै जाति । जोखिम मोल्न नचाहनेहरूले बैंकमा रकम जम्मा गर्ने अनि नियमित ब्याज कमाइरहेनु नै जाति हुन्छ । सेयर बजारमा लाग्ने लगानीकर्ताहरूमा धैर्यता पनि हुन आवशयक छ भने होल्ड गर्न सक्ने क्षमता पनि हुन जरुरी छ । सेयरको भाउ घट्दै छ ।, भोलि फेरि घट्छ कि भनेर डराएर आँत्तिएर घाटा खाएर सस्तोमा सेयर बेचेर बाहिरिने लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा प्रवेश नगरेको नै राम्रो मानिन्छ ।
पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा देखा परिरहेको गतिविधिले लगानीकर्ताहरूको आत्मबल उकास्न सकिरहेको छैन । नेप्से घट्ने क्रमले गर्दा भोलि फेरि घट्छ कि भन्ने त्रासको मनोविज्ञानले काम गरिरहेका छन् । यसले सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहिरहेका लगानीकर्ताहरू पनि प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन् । यस कारणले पनि सेयर बजारले गति लिन नसकिरहेको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको ट्रेण्डलाई हेर्दा सेयरको भाउ घटेको बेला फेरि घट्छ कि भनेर डराएर बेच्ने गरेका हुन्छन् भने बढेको बेला फेरि बढ्छ कि भनेर किन्ने गर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।
त्यसो त सेयर बजार उकालो/ओरालो लाग्नुमा केही ठूलाबढा लगानीकर्ताहरू, सेयर बजारसम्बन्धी संघसंस्थामा आबद्ध ठूलावडा, सेयर बजारका खेलाडी भनिनेहरूले पनि बेला–बेलामा सेयर बजारलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन गरेको चलखेल को भूमिका पनि छ । यसमा लगानीकर्ताहरू भने सेयर बजारप्रति सचेत र चनाखो भने हुनुपर्छ भने सेयर बजारप्रति सकारात्मक पनि हुन जरुरी छ । भाउ घटिरहयो भन्दैमा घाटा खाएर हतारमा सेयर बेचेर सेयर बजारबाट बाहिरिने गर्न भने हुँदैन । यसले सेयर बजार बढ्नमा होइन झन् घट्नमा भूमिका खेल्ने देखिन्छ । सेयर बजार घटेपछि ढिलोचाँडो बढ्छ पनि ।
नेप्से घटबढ हुनु सेयर बजारको विशेषता नै हो । तर, सेयर बजारमा सुधारको सकेट भने देखा परिरहेको छैन । सेयर बजारको विस्तार, विकाश र प्रवर्द्धन गर्ने र लगानीकर्ताहरूको हकहित र अधिकारको लागि भनेर पाँच÷सातवटा सेयर लगानीकर्ताहरूको संघ छन् । तर, यिनीहरू टुट्ने, फुट्ने, जुट्ने अनि नाम र पदको लागि मात्र सीमित भइरहेका छन् । यिनीहरूले सेयर बजार र लगानीकर्ताहरूको लागि खासै काम गर्ने गरेका छैनन् भन्ने सरोकारवालाहरूको आरोप छ । (आर्थिक दैनिकबाट)